Gen. Gorod oo ka qaybgaay shir kadhacay Abuuja oo Mareykanka uu qabtay (sawiro) – Radio Daljir
Abriil 20, 2018 8:08 b 0
Taliyaha Ciidamada Militariga ee Soomaaliya ayaa ka qaybgalay shir kadhacay magaalada Abuuja ee dalka Nigeria uu soo qabanqaabiyay Mareykanka loogana hadlay iskaashiga militariga Mareykanka iyo Afrika.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay taliyayaasha ciidamada militariga ee dalalka Afrika, Kaaliye ku xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ee u qaabilsan Africa Ambassador Stephanie S. Sullivan iyo taliye ku xiggeenka Taliska Mareykanka ee Africom.
Arimaha sida gaarka diiradda loo saaray ayaa waxaa ka mid ah wada shaqayn dhexmarta taliyeyaasha ciidamada difaaca qaaradda, is dhaafsiga xogaha iyo khibradaha.
Taliyaha ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa sidoo kalle kulamo gaargaar ah la yeeshay saraakiishii Mareykanka ee kulanka joogay, isagoona ka codsaday inay dowladda ku taageeraan la dagaalanka Al-shabaab iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Madaxwaynaha Puntland iyo shacabka oo dhaqaalle ugu deeqay dhisme waddo oo Bosaso ah